01 धुर्मुस–सुन्तलीको फिल्म ‘म त मर्छु कि क्या हो’ को ट्रेलर रिलिज
02 सरकारमा सहभागी हुन माधव नेपाललाई २२ सांसदको दबाब
03 रिलायन्स लाइफद्वारा २ करोड ५० लाखको मृत्यु दावी भुक्तानी
04 थप ३८४० संक्रमित थपिए, ३३ जनाको मृत्यु
05 उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८५९ जनालाई कोरोना
06 टोकियो ओलम्पिकबाट गौरिका बाहिरिइन्
07 एसईईको नतिजा साउन २५ गतेभित्र : परीक्षा नियन्त्रक अधिकारी
08 अस्ट्रेलियन खेलाडी इम्माले १०० फ्रि-स्टाइलमा बनाइन् ओलम्पिक रेकर्ड
09 काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद : अधुरा काम फेरि समितिलाई जिम्मा
रिलायन्स लाइफद्वारा २ करोड ५० लाखको मृत्यु दावी भुक्तानी
थप ३८४० संक्रमित थपिए, ३३ जनाको मृत्यु
उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८५९ जनालाई कोरोना
office use १ महिना अगाडि
एजेन्सी : युरोकपमा फ्रान्सले शनिबार नेपाली समयअनुसार ६ः४५ मा हुने खेलमा हंगेरीको सामना गर्दैछ । यसअघि जर्मनीलाई उसैको मैदानमा १–० ले हराउँदै फ्रान्सले प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको थियो । यता, घरेलु मैदानमै पोर्चुगलसँग हंगेरी ३–० ले पराजित भएको थियो ।
तर, हंगेरीले तीनवटै गोल अन्त्यमा गएर खाएको थियो । खेलको ८४ मिनेटसम्म उसले डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगललाई गोल गर्न दिएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा कुनै खेल सहज हुन्न भन्ने दृष्टान्त यो खेल थियो । हंगेरीले पहिलो हाफमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई दोस्रो हाफमा पनि निरन्तरता नै दिएको थियो । खेलपछि उसका प्रशिक्षक मार्को रोस्सीले ८४ मिनेट नभएर ९० मिनेटसम्म लागु हुने गेम प्लान तयार गर्ने बताएका छन् ।
यता, फ्रान्स भने जितका लागि विश्वस्त नै भएको हुनुपर्छ । उसँग राफाल भराने, पाउल पोग्बा, एनगोलो कान्टे, एन्टोनियो ग्रिजम्यान, कालियन एमबाप्पे, करिम बेन्जामाजस्ता विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी छन् । पछिल्लो ५ खेलमा फ्रान्सले कुनै गोल नखाई जित हासिल गरेको छ । आफ्नो क्लिन सिटलाई छैटौं खेलसम्म लम्ब्याउने पक्षमा फ्रान्स हुनेछ । घरेलु समर्थकको सद्भावले पक्कै पनि बुडापेस्टमा फ्रान्सविरुद्ध भिड्नका लागि हंगेरीलाई हौसला भने दिनेछ ।
के भन्छन् प्रशिक्षक ?
मार्को रोस्सी, हंगेरी : हाम्रा लागि यो ठूलो प्रेरणा हो । हामी विश्व च्याम्पियनको कुरा गरिरहेका छौं । जो स्पष्ट दाबेदार हो र जोसँग यो दुनियाँबाहिरका एमबाप्पे छन् । हामी झन्डै असंभव कार्य पछाडि उभिएका छौं, तर पनि हामी आफ्नो तर्फबाट सबै दिन गइरहेका छौं ।
डिडियर डेसच्याम्पस, फ्रान्स : उनीहरु लडाकु र कडा मेहिनती टोली हुन् र निकै संयोजित छन् । इटलियन प्रशिक्षक हुनुले पनि उनीहरुबारे धेरै वर्णन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उनीहरु घरमा छन् र पोर्चुगलविरुद्ध उनीहरुले देखाएजस्तै प्रतिबद्धता आजको खेलमा देखाउनेछन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यदी हामीले जित्यौं भने हामी दोस्रो खेलबाटै दोस्रो चरणमा छनोट हुनेछौं । हाम्रो पहिलो लक्ष्य त्यही हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
टोकियो ओलम्पिकबाट गौरिका बाहिरिइन्
अस्ट्रेलियन खेलाडी इम्माले १०० फ्रि-स्टाइलमा बनाइन् ओलम्पिक रेकर्ड
टोकियो ओलम्पिकमा गौरिकाको प्रतिस्पर्धा आज
टोकियो ओलम्पिकस् एलेक्सले बनाए राष्ट्रिय कीर्तिमान